Nagarik News - कमलका आत्मामा केबल फ्यान
सोमबार २८ फागुन, २०६९
हिजोआज भ्याइनभ्याइ छ है तपाइंलाई?
हो नि। दशैँदेखि यस्तो भएको हो। रेकर्डिङ, कम्पोजिसन, कार्यक्रम सबैतिर भ्याउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ त दिमागै ह्याङ हुन्छ।
ह्याङ भएर के भो त, पैसा कमाइहालिन्छ...
हाहाहा। पैसा त त्यस्तै हो। दर्शक-स्रोताको माया चाहिँ मनग्गे कमाइन्छ।
गीतसंगीतको कुरो के हुँदै छ? तेस्रो एल्बम कहिले निकाल्ने हो?
रेखा दिदी (रेशा शाह) सँग एउटा डोयट गीत गाएको छु। त्यसको भिडियोको काम हुँदै छ। अरू गीत पनि कुनै रेकर्डिङ हुँदै छन्, कुनै मिक्सिङ, अरेञ्जमेन्ट त्यस्तै-त्यस्तै छ। 'आत्मामा' बोलको हमिङहरू राखेर 'टुत्रे्कको मुटु' भन्ने गीतलाई तयार पार्दै छु। एल्बमै चाहिँ निकाल्दिनँ।
एल्बम निकालेर फाइदै छैन। प्रमोसनल सङबाहेक अरू गीत छायामा पर्छन्। बरु, एकुन्टा गरी निकाल्यो भने सबै गीतलाई न्याय हुन्छ।
तपाईं पहिले स्टुडियोमा काम गर्नुहुन्थ्यो रे हो?
हो। २०५९ सालमा सर्लाहीबाट गीत गाउन भनी काठमाडौँ आएको थिएँ। तर, गीत गाउनु त कुरै छोडौँ, पेट पाल्न पनि मुस्किल भयो। एकजना दाइलाइ भनसुन गरेर बालाजुको एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोमा माइक, तार आदि मिलाउने काम गर्न थालेँ। आफूलाई गीत गाउने कत्रो रहर थियो। अरूका लागि माइक मिलाउँदा मन कटक्कै खान्थ्यो नि।
त्यसपछि के गर्नुभयो?
पछि त स्टुडियोहरूले रुवाउनु रुवाए नि मलाई। काम गरेबापत गीत रेकर्ड गर्न दिउँला भनेर आश्वासन दिन्थे। होला त नि भनेर काम गर्‍यो, लास्टमा हिस्सै! पाँच-छ वटा स्टुडियोमा काम गरेँ हुँला, तर सबैले झुलाए मात्रै। दुईतिन चोटि त फ्रस्टे्रटेड भएर गाउँ पनि फर्केको थिएँ। तर, गाउँ गएपछि आफू हुतिहारा भ'को जस्तो लाग्थ्यो। फेरि काठमाडौँ आउँथे। न यहाँ बस्न सक्नु न उहाँ! म त पागलै भएको थिएँ नि एकचोटि त।
त्यतिबेला गीतसंगीतको क्लास लिनुहुन्थ्यो कि नाइँ?
गाडी चढ्ने भाडा नभएर स्टुडियोमै सुत्नुपर्ने अवस्था थियो, के-को क्लास लिनु नि?
'इथोज' ब्यान्डसँग चाहिँ कसरी चिनजान भयो?
स्टुडियो आउजाउ गर्ने क्रममा एकदिन अजयशमशेर राणासँग चिनजान भयो। कुरा गर्दै जाँदा उनले ब्यान्ड खोल्ने योजनाबारे सुनाए। भोकलिस्ट खोज्दै रहेछन्। मलाई गाउन आउँछ भनेर थाहा पाएपछि 'इथोज' नाम राखेर ब्यान्ड सुरु गरेका थियौँ।
त्यसपछि तपाईंको भाग्य खुल्यो?
त्यस्तै भन्नुपर्‍यो। 'नक्कली मैयाँ', 'झ्यालैमा', 'सुस्तरी'लगायत गीत हिट भए। ब्यान्डसँगै म पनि चिनिन थालेँ।
अहिले त तपाईं गीतकार, गायक, संगीतकार सबैथोक बन्नुभएको छ। के भनेर सम्बोधन गर्नु?
म गायक हुँ। गीत पनि लेख्छु। तर, संगीतकार चाहिँ मलाई बाध्यताले बनाएको भन्दा पनि हुन्छ।
हो र? अलि स्पष्टसँग भन्दिनुस् न।
मसँग गीतहरू त हुन्थे। तर, ती गीत संगीतकारलाई सुनाउँदा 'राम्रो छ' मात्र भन्थे। त्यसपछि कुरा सकिन्थ्यो। मलाई पनि झोँक चल्यो। बरु, आफ्नो गीत आफैँ कम्पोज गर्नुपर्‍यो भनेर त्यो काम पनि सिकेको थिएँ। अहिले आफ्नो, अर्काको सबैको गीतमा कम्पोजिसन पनि गर्दिन्छु।
तपाईंका कम्पोजिसन प्रायः एउटै प्याटर्नका हुन्छन् रे नि?
हैन। म त सधँै गीतमा भेराइटी दिन खोज्छु। तर, हिजोआज लभ सङ बढी चलेका छन्। मेरा स्रोताले त्यस्तै खोज्छन् भने मैले अनेक थरी गर्नुको अर्थ हुन्न। 'आत्मामा' हिट भएपछि सबैले त्यस्तै गीत गाऊ भनेका छन्। मैले चाहिँ जान्ने भएर एक्कासि प्याटर्न चेन्ज गर्ने कुरा पनि त आउँदैन।
'आत्मामा' गाउनेको आत्मामा को-को विराजमान् छन्?
मेरो आत्मामा त फ्यानहरू छन्। अरू कोही छैन।
गफै त हो नि!
खासमा मलाई फ्यानहरूले बिहे नगर्नुस् भनेका छन् क्या।
फ्यानका लागि आजीवन ब्रम्हचारी नै बस्ने त?
हैट्! त्यस्तो हैन। बिहेको विषयमा सोच्ने बेला भएकै छैन।
कहिले हुन्छ त बेला?
भर्खर १७-१८ वर्षको हुँदैछु। हाहा। हेरुम् केहि वर्ष ...
ठमेलः इमेज खराब छ
हो, ठमेलको छवि खराब भइरहेको छ। साँझ पर्नेबित्तिकै यसको ढोकै अगाडि तेस्रोलिंगीहरू कटाक्ष र नखरा गरिरहेका हुन्छन्। मसाज सेन्टरका बोर्ड फेरिएका छन्, धन्दा कायमै छ। डान्सबारका गोप्य कोठामा रासलीला चलिरहेकै...
अभिनेत्री मेलिना मानन्धर अभिनयकर्ममा फर्किएकी छिन्। विवाहपश्चात् अभिनयलाई घटाउँदै लगेकी उनी छोरी जन्मिएपछि यस क्षेत्रबाट टाढिएकी थिइन्। फिल्म 'धम्मवती' मार्फत उनको पुनरागमन भएको हो। राज शाक्य निर्देशित 'धम्मवती'मा मेलिना भिक्षुणीको...